1355 June 18, 2017
DVB Debate – ၆၆ (ဃ) ဖျက်သိမ်းဖို့ လိုပြီလား ?? “၆၆(ဃ) ဖျက်လိုက်ရင် ရပါတယ် တခြားစွဲလို့ရတဲ့ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မတွေလည်း ရှိနေတာပဲလေ. အခုက ဒီပုဒ်မကို ကြောက်ပြီး စာရေးဆရာတွေက စာမရေးတော့ရင် သတင်းမီဒီယာတွေ သတင်းအမှန်မရေးနိုင်တော့ရင် အရွေ့ကမမြန်တဲ့အနေအထားမှာ ပို နှောင့်နှေးသွားနိုင်တယ်။ ဒီမိုကရေစီ အောက်ကျသွားမှာ စိုးရိမ်တယ်” – ဦးရဲထွဋ် (ခ) စာရေးဆရာ ၀င်းထွဋ်ဇော် – အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် “၆၆ ဃနဲ့ တရားစွဲဖို့ရာ ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရမှာသာ တရားစွဲလို့ရတယ် ၀န်ကြီးဌာနကလည်း သွားခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါ ရဲအရေးပိုင် အမှုလိုလိုဖြစ်သွားတယ်” ဦးငိုင့်ဆာ့ခ် – တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ၊ မြို့နယ်တရားသူကြီးဟောင်း “ဖေ့ဘွတ်သုံးနေကြတဲ့သူတွေမှာ တချို့ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းသုံးနှုန်းကြတာ ရှိတယ် အဟန့်အတားလေးတွေရှိရင်တော့ ကောင်းမယ်” – …Read more »
ပုဂ္ဂလိက လွှဲပြောင်းမှုက ပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းကျိုးလား ဆိုးကျိုးလား?
1446 June 15, 2017
DVB Biz Debate – ပုဂ္ဂလိက လွှဲပြောင်းမှုက ပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းကျိုးလား ဆိုးကျိုးလား? “အရေးယူတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ သူတို့ ပြောကြပါတယ်။စာချုပ်ချုပ်ပြီးပြီ ။ပြင်လို့မရတော့ဘူး လုပ်လို့မရ တော့ဘူး။ဒါကအားလုံးသဘောတူထား တာ။ကျွန်တော်မငြင်းပါဘူး။သို့သော် ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်တွေဘယ်လောက် အထိတရားဝင်လဲ။ဘယ်လောက်အထိဥပဒေအရဘောင်ထဲ မှာရှိသလဲ။ တိုင်းပြည်က တကယ်နစ်နာတယ်။စက်ရုံကြီးတွေ အကြီးကြီးတွေယူပြီး ဘာမှလဲမလုပ်ဘူး။ ထုတ်လုပ်မှုလဲမတက်ဘူး။ ဒီလိုဈေးခေါ်ရောင်းတဲ့ပုံစံ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ကိုပြန် review လုပ်နိုင်တဲ့ဥပဒေ ရှိပါတယ်” – ဦးအေးလွင်(ဗဟိုစီးပွားရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) “တချို့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ Privatizationလုပ်ရမယ်။တချို့လုပ်ငန်းတွေ ကိုတော့ commercial ပုံစံလုပ်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာခက် တဲ့ပြဿနာက အစိုးရအဖွဲ့ကြီးတွေမှာလုပ်တဲ့လူဟာ သူက စီးပွားရေး လည်းလုပ်တယ်။တဖန်သူက Regulator ပြန်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ အစိုးရမှာ Knowledge ရှိဖို့ လိုတာပေါ့” – ဦးကျော်မျိုးထွန်း(Financial consultant) “နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေကို …Read more »
ရွာငံတ၀ိုက်က ဒေသခံတွေရဲ့ အခက်အခဲကို ကျေးရွာနှစ်ရွာပေါင်းပြီး ကြိုးစားရုန်းကန်
656 June 14, 2017
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဓနု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသဖြစ်တဲ့ ဒေသ ရွာငံဒေသတ၀ိုက်က ဒေသခံတွေရဲ့ အခက်အခဲတခုကို ကျေးရွာနှစ်ရွာပေါင်းပြီး ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ဒီတပတ် တယောက်တလက် အစီအစဉ်မှာ တင်ဆက်ထားပါတယ်။ DVB TV – 14.06.2017
ကံကုန်းရွာ ရဲ့ ဒုက္ခ
1596 June 14, 2017
ကြေးနီထွက်တဲ့ ကြေးစင်တောင်ဒေသ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ကံကုန်းရွာ… အနားမှာရှိတဲ့ ကြေးနီထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့ အက်ဆစ်စက်ရုံကြောင့် မြေအောက်ရေပျက်စီးတာ၊ လေထုညစ်ညမ်းတာတွေကို ခံစားလာတာ ဆယ်စုနှစ်တစုကျော် ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေ့ close-up အစီအစဉ်မှာတော့ ကံကုန်းရွာသူရွာသားတွေ ခံစားနေကြရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကို ရှုစားကြရမှာပါ။ DVB TV – 14.06.2017
ဘိလိယက် လက်ရွေးစင် ဖုန်းမြင့်ကျော် ရုပ်သံမှတ်တမ်း
2023 June 13, 2017
DVB TV – ဘိလိယက် လက်ရွေးစင် ဖုန်းမြင့်ကျော် ရုပ်သံမှတ်တမ်း ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၈ နဲ့ အဆင့် ၁၃ ထိ ရရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာ နာမည်တစ်လုံးရလာပြီဖြစ်တဲ့ ဘိလိယက်9Ball ကစားသမား အားတီ(ခ) ဖုန်းမြင့်ကျော် တင်ဆက် – ထက်လူ
ပန်းချီ နှင့် အမျိုးသမီး လောက
800 June 13, 2017
ပန်းချီ နှင့် အမျိုးသမီးလောက အမျိုးသမီး စကားဝိုင်း တင်ဆက် – တူးတူးမြင့်သိန်း DVB TV – 13.06.2017
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ၂၁ ပင်လုံ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာ
1479 June 11, 2017
DVB Debate – ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ၂၁ ပင်လုံ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာ “အန်စီအေရဲ့ အစမှာ လမ်းကြောင်းမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ ပါဝင်မှုနဲ့ စခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ စာချုပ်ရေးခဲ့ချိန်မှာ အားလုံးပါဝင်ခဲ့တယ် ဒီစာချုပ်ကို ဦးတည်ပြီး ကိုင်ပြီးမှ သွားသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်” ဒေါ်စောမြရာဇာလင်း – ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်၊ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ “ညီလာခံကထွက်လာတဲ့ သဘောတူညီချက် ၃၇ ချက်ဟာ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လွှမ်းခြုံတဲ့ ဆွေးနွေးသဘောတူညီမှု အချက် ၃၇ ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ညီလာခံတက်ရောက်သူတွေက ကျနော်တို့ ဒါလိုချင်တယ်ဆိုပြီး ပြောလို့ ထည့်ထားတဲ့အချက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။” ဒေါက်တာ အင်ဒရူး ငွန်ကျုံးလျန် – အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ၊ ဥပဒေ အတိုင်ပင်ခံ “ညီလာခံမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့ အပိုင်းတွေရှိတယ်။ …Read more »
အလှကုန်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့ လိုသလား
717 June 11, 2017
အလှကုန်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့ လိုသလား ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းချနေတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတချို့ကို FDA က အခါအားလျှော်စွာ စစ်ဆေးပြီး သုံးစွဲရန် မသင့်တဲ့ အလှကုန်တွေကို ရံဖန်ရံခါ ထုတ်ပြန် ကြေညာတာမျိုး ရှိပေမယ့် အရည် အသွေး မပြည့်တဲ့ အလှကုန် တွေ၊ အတုအပ အလှကုန်တွေဟာ အခုချိန်ထိ ဈေးကွက်ထဲက ပပျောက်သွားခြင်း မရှိသေးပါဘူး ။ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့လည်း အခုချိန်ထိ ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်ကို မရကြသေးပါဘူး ။ဒီအစီအစဉ်မှာ အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုမလို ၊ ပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုရင် ဒီဥပဒေမှာ ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေ ပါသင့်သလဲ ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင်သဘောထားတွေကို နယ်ပယ် အသီးသီးက ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ DVB TV – …Read more »
1172 June 11, 2017